Madaxweynaha Koonfur-Galbeed oo QM iyo Midowga Afriuca uga warbixiyay arrimaha doorashooyinka – Kalfadhi
James Swan oo booqday Koonfur-Galbeed.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayey Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Arimaha Soomaaliya Amb James Swan iyo sidoo kale wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale.
Kulanka ayaa diirrada lagu saaray arrimaha doorashooyinka, amniga iyo sidii loo dardar-gelin lahaa doorashada xubnaha Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaliya.
Mudane Lafta-Gareen, ayaa madaxda QM iyo Midowga Africa uga warbixiyay arrimaha doorashooyinka, bulshada, dib-u-heshiisiinta iyo amniga.
Koonfur-Galbeed ayaa kamid ah maamuladda soo dhammaayey doorashadda Aqalka Sare, haddana dadaal ugu jira diyaarinta doorashadda Aqalka Saare.